Cetilistat အမှုန့်ကိုယူမတိုင်မီကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရန် 8 မေးခွန်းများကို | AASraw
/ဘ‌‌လော့ခ်/cetilistat/ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရန် 8 မေးခွန်းများကိုမတိုင်မီ Cetilistat အမှုန့်ကိုယူ
အပေါ် Posted 09 / 14 / 2018 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် cetilistat.
1 ။ ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Cetilistat
2 ။ ယင်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ဓာတု Properties ကို
3 ။ Cetilistat မှုန့်ရိုးရှင်းတဲ့ဖျေါပွခကျြ
4 ။ Cetilistat အမှုန့်များ၏လှုပ်ရှားမှုယန္တရား
5 ။ Cetilistat အသုံးပြုခြင်း
6 ။ Cetilistat အမှုန့်သောက်သုံးသော
7 ။ Cetilistat ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု
8 ။ Cetilistat ကွိုတငျကာကှယျမှုမြား
သိုလှောင်ခြင်းအဘို့အ 8.1 လမ်းညွှန်များ
သငျသညျ Cetilistat အမှုန့်ပေါ် Overdose သည့်အခါဖွစျသှားအဘယ်အရာ 8.3
ကလေးများအတွက် Cetilistat ၏ 8.4 အသုံးပြုခြင်း
1. ထုတ်ကုန်အမည်: Cetilistat
IUPAC အမည်: 2-hexadecoxy-6-methyl-3,1-benzoxazin-4-One
2. ယင်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ဓာတု Properties ကို
မိုးသည်းထန်စွာ Atom အရေအတွက် 29
XLogP3-AA ကို 9.8
အတိအကျ Mass 401.293 g / mol
Topological အရောင်အသွေးစုံ Surface ကဧရိယာ 47.9 တစ် ^ 2
Rotate ဘွန်းအရေအတွက် 16
မော်လီကျူးအလေးချိန် 401.591 Mol
3. ၏ရိုးရှင်းသောဖျေါပွခကျြ Cetilistat အမှုန့်
Cetilistat အဝလွန်တစ်ဦးချင်းစီကိုယ်အလေးချိန်ကိုကူညီရေးဆွဲရဲ့တစ်ဦးပါးစပ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦး oxizine လက်စွပ်သို့ပေါင်းစပ် benzene ဆံ့ကြောင်းအော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သော benzozaxines, အောက်မှာခွဲခြားထားပါသည်။ အဆိုပါ oxizine လက်စွပ်အခြေခံအားဖြင့်6နိုက်ထရိုဂျင်အက်တမ်, 1 အောက်စီဂျင်အက်တမ်နှင့် 1 ကာဗွန်အက်တမ်နှင့်အတူတစ်ဦး 4-membered aliphatic လက်စွပ်ဖြစ်ပါတယ်။
လူ့စမ်းသပ်မှုတွေပါဝင်သောလေ့လာရေး cetilistat Orlistat (Xenical) မှအလားတူထုံးစံ၌အလုပ်လုပ်တည်စေပြီ။ ဤ ကိုယ်အလေးချိန် မူးယစ်ဆေးမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အူထဲမှာ triglyceride ဖြိုဖျက်သောအင်ဇိုင်းဖြစ်သောပန်ကရိယ lipase, နှေးကွေး။ ဒီအင်ဇိုင်း၏မရှိခြင်းကိုစုပ်ယူအခမဲ့ဖက်တီးအက်ဆစ်သို့ triglyceride ၏ hydrolization ကာကွယ်ပေးသည်။ ဤသည် undigested ပြန်ထွက်သွားသည်ကိုခံရဖို့ triglyceride အဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
4. Cetilistat အမှုန့်များ၏လှုပ်ရှားမှုယန္တရား
ရုံ Orlistat ကဲ့သို့ Cetilistat ကအစားအသောက်ဆီ၏ပျက်ပြားများအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အင်ဇိုင်းတွေနေသော lipases, နှေးကွေးဖို့အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းထဲမှာပြုမူဆိုလိုတာကတစ် lipase inhibitor ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအူကနေအစားအသောက်ဆီ၏ပျက်ပြားခြင်းနှင့်စုပ်ယူထိခိုက်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်, မူးယစ်ဆေးအကျိုးဆက်ကိုယ်အလေးချိန်အကူအညီပေးနေတာ, ကယ်လိုရီများနှင့်အဆီစားသုံးမှု minimize လုပ်ဖို့ကူညီပေးသည်။
5. Cetilistat အသုံးပြုခြင်း
အဆင့် II ကိုစမ်းသပ်မှုတွေ၏တစ်ဦးကစီးရီး Cetilistat ရဲ့ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှုပြသခဲ့ကြသည်။ တဦးတည်းရုံးတင်စစ်ဆေး 12 ရက်သတ္တပတ် spanning နှင့် 612 အဝလွန်ဆီးချိုလူနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုနှစ်, သုတေသီများ 80 မီလီဂရမ်ကိုအသုံးပြုတဲ့သူလူနာများနှင့် Cetilistat မှုန့် 120 မီလီဂရမ်အသီးသီး 3.85 ကီလိုဂရမ်နှင့် 4.32 ကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံးဖို့စီမံခန့်ခွဲခြင်း, စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့ကွောငျးကို။ အထဲကရှာတွေ့ ဤသည်ရလဒ်များအရအိပ်ယာကိုယူသောသူတို့အလူနာအားဖြင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော 2.86 ကီလိုဂရမ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဖြစ်ပါတယ်။
Cetilistat Orlistat အဖြစ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုအတိအကျဒီဂရီရရှိမသာပေမယ့်နှစ်ဦးစလုံးကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးဝါးများလည်းကစာရင်းအင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ HbA1c လျှော့ချထုတ်လုပ်ရန်သရုပ်ပြပါပြီ။
တဦးတည်းလေ့လာမှုရဲ့အစမှာလူနာ 28 နှင့် 45 အကြားတစ်ဦးခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်းနှင့်ဆီးချိုရောဂါကိုထိန်းချုပ်ရန် Metformin ဆေးဟာလည်းပေးထားခဲ့ကြသည်။ cetilistat ယူသူလူနာ Orlistat ဘမ်းဆီးသောသူတို့အားသလောက်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော်လည်း, ထို cetilistat အဖွဲ့မူးယစ်ဆေးအများကြီးပိုကောင်းသည်းခံ။ တရားခွင်၏အဆုံးမှာသူက cetilistat ၏သည်းခံစိတ်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှစ်ဦးစလုံးရလဒ်များကိုယခင်စမ်းသပ်မှုများတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာသူတို့နှင့်အတူတသမတ်တည်းကျန်ရစ်ကြောင်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
ကြောင့်ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များမှအလျင်စလိုပြတ်တောက်၏နှုန်းထားများအသီးသီး 2.5 မီလီဂရမ်, 5.0 မီလီဂရမ်နှင့် 2.5 မီလီဂရမ် cetilistat များအတွက် 120 ရာခိုင်နှုန်းနှင့် 80 ရာခိုင်နှုန်းကို 40 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိကြ၏။ ဤသည်ရလဒ်များအရအိပ်ယာများအတွက် Orlistat နှင့် 11.6 ရာခိုင်နှုန်း 6.4 ရာခိုင်နှုန်းနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ Orlistat ၏ရေတိုရေရှည်လက်တွေ့အသုံးချဘို့ကအဓိကအကြောင်းပြချက်မူးယစ်ဆေးရဲ့ဒုက္ခအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။
6. Cetilistat အမှုန့်
အများဆုံးကိစ္စများတွင်ဆရာဝန်များက 60 မီလီဂရမ်ကနေ 100 မီလီဂရမ်အထိ cetilistat ဆေးညွှန်းသတ်မှတ်။ သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်များကသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းအတိအကျအဖြစ် cetilistat ယူသင့်ကြောင်း, အကြံပြုမဟုတ်လျှင်သောက်သုံးသောထက်မပိုသင့်ပါတယ်။
သငျသညျ levothyroxine သို့မဟုတ် cyclosporine ယူပြီးနေတယ်ဆိုရင်, မပြုမီသို့မဟုတ် cetilistat ယူပြီးပြီးနောက်ဒီဆေးတွေ 4-5 နာရီကိုယူမှသေချာပါစေ။
7. Cetilistat ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု
အများဆုံး (မယ်ဆိုရင်အားလုံးမဟုတ်) နဲ့အမျှ ကိုယ်အလေးချိန် မူးယစ်ဆေးဝါး, cetilistat အချို့ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဘုံ cetilistat ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတို့ပါဝင်သည် (သို့သော်ကန့်သတ်မဟုတျပါ):
အူသိမ်အူမ incontinence ဝမ်း
သငျသညျ cetilistat သုံးပြီးပြီးနောက်မည်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရပါကနှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲဆေးကုသရှာအရေးကြီးပါတယ်။
8. Cetilistat ကွိုတငျကာကှယျမှုမြား
အခန်းအပူချိန်မှာ cetilistat တက်ဘလက်များသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါရေနုတ်မြောင်းသို့ cetilistat တက်ဘလက်များလောင်းမဟုတ်သလိုအိမ်သာသူတို့ကိုနှိမ့်ချရှင်းလင်းရန်မရှိ။
လုံခြုံစွာ cetilistat တက်ဘလက်များဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သင့်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရန်သေချာစေပါ။
တစ်ဦးထိုးလွဲချော်? အဖြစ်မကြာမီသငျသညျသတိရအဖြစ်ကိုယူပါ။ ဒါဟာနီးပါးသင်၏နောက်အချိန်ကာလသတ်မှတ်ထိုးဘို့အချိန်ပါလျှင်, သင့်လွဲချော်ထိုးမေ့လျော့ခြင်းနှင့်နောင်လာမည့်အချိန်ကာလသတ်မှတ်တဦးတည်းယူပါ။ အဆိုပါလွဲချော်တဦးတည်းတက်သည်ဖြစ်စေတစ်ဦးအပိုဆောင်းထိုးယူဘယ်တော့မှမ။ လာမယ့်ဆေးထိုးပြီးနောက်ရုံပုံမှန်အတိုင်းဆေးများသင့်ရဲ့အချိန်ဇယားကိုပြန်လည်စတင်။
သငျသညျဖြစ်ကောင်းအံ့သြနေတဲ့ - ငါထိုးလက်လွတ်လျှင်ဘာဖြစ်သွားသနည်း ကောင်းပြီ, တစ်ဦးထိုးပျောက်ဆုံးကုသမှု၏ထိရောက်မှုကိုလျှော့ချနှင့်သင့်ကိုယ်အလေးချိန်အောင်မြင်မှုနှုန်းကိုဟန့်တားမည်ဖြစ်သည်။ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဆေးကုနေစဉ်တစ်ထိုးပျောက်ဆုံးနေကုသမှု၏ထိရောက်မှုကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ထပ်တလဲလဲဆေးများလက်လွတ်လျှင်အချို့သောလူနာတောင်မှအစောပိုင်းရုပ်သိမ်းဆိုင်းဘုတ်များဖော်ပြရန်။
အောက်ပါသင့်ရဲ့ cetilistat ထိုးပျောက်ဆုံးထံမှသင်တို့တားဆီးနိုငျကွောငျးအခြို့သောအထောကျအကူအကြံပေးချက်များနေသောခေါင်းစဉ်:
8.3 သင်တို့အပေါ်မှာ Overdose သည့်အခါဖွစျသှားအဘယျသို့ Cetilistat အမှုန့်
သငျသညျသင်တို့ရှိရာသို့အလျင်အမြန်မျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့တပ်မက်လိုချင်သောရလာဒ်များရရှိမဟုတ်နေတယ်ဆိုရင်တောင်မှလုပ်ငန်းစဉ်အလျင်စလိုနိုင်ရန်အတွက်ပိုကြီးတဲ့ပမာဏအတွက်မူးယစ်ဆေးကိုယူပြီးစဉ်းစားကြဘူး။ ဒါဟာသင်သတ်မှတ်ထားသောထက်ပိုကြီးတဲ့ပမာဏသို့မဟုတ်တိုတောင်းကြားကာလအတွက် cetilistat ယူလျှင်ပင်, သငျသညျလညျးမအရှုံးထက်ပိုသောအလေးချိန်လိမ့်မယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, မပိုမိုလျင်မြန်စွာကိုယ်အလေးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအစားသင်ကမူးယစ်ဆေးဝါးအပေါ် overdose နှင့်သေခြင်းဆီသို့ဦးတည်နိုင်ကြောင်းအချို့သောပြဿနာများနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
အမှု၌သင်တို့ကိုအနီးအနားမှာအရေးပေါ်အခန်းသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးစင်တာထံမှဆေးကုသမှုကိုရှာ cetilistat အပေါ် overdose ။ ဒါဟာဆရာဝန်များကမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်သည့်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များရယူနိုင်အောင်သင်တံဆိပ်, ကွန်တိန်နာ, ဒါမှမဟုတ်သင်နှင့်အတူ box ကိုဆောင်ကြဉ်းအလွန်အရေးကြီးသည်ပါပဲ။
Cetilistat အသုံးမပြုခင်ကမူးယစ်ဆေးများနှင့်မည်သို့လုံလုံခြုံခြုံယူအကြောင်းကသင်၏ဆေးဝါးသို့မဟုတ်ဆေးသမားကိုတိုင်ပင်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်ပါပဲ။ ရုံများစွာသောအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့ Cetilistat shared မရသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်သူသို့မဟုတ်သူမကိုသင်ကဲ့သို့တူညီသောပြဿနာရှိပါတယ်ရင်တောင်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုသင့်သတ်မှတ်ထားသော cetilistat တက်ဘလက်များမပေးသင့်ကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။ သတ်မှတ်သောက်သုံးသောသင်တို့အဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အခြားတစ်ခုအလွန်အကျွံသုံးစွဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Cetilistat ၌ 8.4 အသုံးပြုခြင်း ကလေးများ
ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထိခိုက်နိုင်သကဲ့သို့ Cetilistat ကလေးများအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားမရသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ 18 နှစ်ပေါင်းသည်အထိသို့မဟုတ်ကြီးထွားပြီးပြည့်စုံသည်အထိကုသမှုနှောင့်နှေးစေရန်, ဒါကြောင့်, အကြံပြုလိုတယ်။
အထူးသဖြင့်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းသားသမီးတို့, ကသူတို့ရဲ့အမြင့်နှင့်တိုးတက်မှုနှုန်းအပေါ်အလားအလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိနိုင်ပါသည်အဖြစ်ဒီဆေးတွေကိုသုံးပါရန်တိုက်တွန်းကြသည်မဟုတ်။ ကြီးထွားပြီးပြည့်စုံသည်အထိကုသမှု, ရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်မပေးမိလျှင်, နှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။ [
လေ့လာရေးတစ်ဦးကစာရင်းအင်းနှင့်ဆေးခန်းစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာထုတ်လုပ်အတွက်အစွမ်းထက်ဖြစ် Cetilistat အမှုန့်ပြသကြ ကိုယ်အလေးချိန် အဝလွန်နှင့်အဝလွန်တစ်ဦးချင်းစီ၌တည်၏။ ကိုယ်အလေးချိန်နိုင်ဖြစ်ခြင်းအပြင်အခြားအဝလွန်ခြင်း-related မမှန်နှင့်အတူလူနာကိုလည်းစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာတိုးတက်မှုခံစားခဲ့ရသညျ။
Yamada က Y, Kato T က, Ogino H ကို, Ashina S က, Kato ငွေကျပ်: Cetilistat အမှုန့် (ATL-962), တစ်ဝတ္ထုပန်ကရိယ lipase inhibitor, ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အမြတ် ameliorates နှင့်ကြွက်များတွင် lipid profile များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ Horm Metab Res ။ 2008 သြဂုတ်; 40 (8): 539-43 ။ Doi: 10.1055 / s ကို-2008-1076699 ။ EPub 2008 မေလ 21 ။
P ကို ​​Kopelman, တစ်ဦးက Bryson, R ကို Hickling, တစ်ဦးက Rissanen, S ကို Rossner, အဝလွန်ခြင်းအသံအတိုးအကျယ် 31, စာမျက်နှာ 494-499 ၏ S ကို Toubro & P ကို ​​Valensi အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ် (2007
4535 Views စာ
Cetilistat အမှုန့် VS အဝလွန်ခြင်းအမှုန့်
anti-အဝလွန်ခြင်းအမှုန့်: Orlistat အမှုန့် vs Cetilistat အမှုန့်
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Cetilistat (Cetislim) အမှုန့်အရာအားလုံးကိုသိရန်မည်သို့
-Phenylpiracet ၏စျေးကွက်အတွက်7အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး)	Bromantane ၏စျေးကွက်အတွက်7အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး)